RASMI: Dawlada UK Oo Ku Dhawaaqday Warkii Dunidu U Dhag Taagaysay & Wakhtiga Ciyaaraha Dalkaas Iyo Premier League Dib Loo Bilaabayo Oo Ay Shaacisay - Gool24.Net
RASMI: Dawlada UK Oo Ku Dhawaaqday Warkii Dunidu U Dhag Taagaysay & Wakhtiga Ciyaaraha Dalkaas Iyo Premier League Dib Loo Bilaabayo Oo Ay Shaacisay
May 11, 2020 Apdihakem Omer Adem
Dawladda dalka UK ayaa go’aan rasmi ah kasoo saartay arrimaha kulamada ciyaaraha kaddib mudo ku dhawaad laba bilood ah oo ah ciyaaraha kala duwani u maqnaayeen sababo la xidhiidha xanuunka dunida ku fiday ee Coronavirus.
Warkan ayaa ah war farxad weyn u ah dhammaan kooxaha UK oo dhan, go’aanka ay dawlada dalkaasi soo saartay ayaa ah in dhacdooyinkii ciyaaraha iyo kuwii dhaqankuba ay noqon doonaan kuwo qabsooma laga bilaabo 1-da bisha June.
Shuruuda ku xidhan warkan ay haatan sida deg-dega ah u shaacisay dawlada dalkaasi ayaa ah in kulamada ciyaaraha iyo kuwa sharciguba ay ku bilaabmi doonaan qaab jamaahiir la’aan ah si looga hortago halista ka dhalan karta xidhiidh ay sameeyaan dad badani.
Maamulka horyaalka Premier League ayaa maanta kulmaya si ay uga wada hadlaan qaabka xilli ciyaareedka dib loogu bilaabayo walow aan shirka maanta lagaga hadli doonin oo aan loo coddayn doonin qoddobka ah in 12-ka June dib loo bilaabo Premier League sida wararka qaar sheegayeen.
Dhammaan 20-ka kooxood ee Premier League haatan qaybta ka ah ayaan ahayn kuwo si buuxda iskugu raacsan mashruuca dib loogu bilaabayo xilli ciyaareedka balse kuwa qabay aragtida ah in dib loo bilaabo ayaa garab ka helaya warkan ay hada dawlada dalkaasi shaacisay.
Marka laga yimaado in kulamadu ahaan doonaan kuwo muuq-baahiyayaasha laga daawado, jamaahiirta kuwooda garoomada tagi jiray ayaa ahaan doona kuwo ay ku qaadan karto ku dhawaad hal sano kahor inta aan loo ogolaan inay kulamada ku laabtaan.
Ra’iisal wasaaraha UK ee Boris Johnson iyo dawladiisa ayaa aaminsan inay adagtahay in lagu badbaado garoomo buuxa iyo ciyaaro ay taageerayaal daawanayaan ilaa inta daawada Coronavirus laga helayo.